Masar: Kooxda “Hasm” oo askar badan ku xasuuqday Gobolka Giza – Kasmo Newspaper
Masar: Kooxda “Hasm” oo askar badan ku xasuuqday Gobolka Giza
Updated - October 21, 2017 1:02 pm GMT
London (Kasmo), Wararka ka imanaya Masar ayaa sheegaya in 54 askari oo Boliis ah lagu dilay iska horimaad hubaysan oo dhexmaray koox Xukuumaddu u aqoonsantahay argagixiso lana magac baxday “Hasm”.
Is rasaasaynta oo Jimcadii ka dhacday aagga saxaraha ah “El-Wahat el-Baharaiya” ee Gobolka Giza, waxay bilaabatay markii ciidanku ugu dheceen meel ay ku dhuumanayeen xubno ka tirsan ururkaan.
Wararka ayaa sheegaya in 1 sarkaal iyo 4 askari oo qur ah ka badbaadeen halka 32 askari oo kale ku dhaawacmeen, tirada geeriduna ka sii badan karto intaas.
Weerarka waxaa sheegatay isla Kooxda oo soo saartay qiraal ka duwan midka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee lagu sheegay in tiro an sugnayn laga dilay kooxda, halka iyaduna sheegatay in dagaalyahannadoodii soo laabteebn iyaga oo bad qaba.
Kooxda “Hasm” oo loo yaqaanno “Harakat- Hasm” waxaa la sheegay in ay gacansaar la leedahay Akhwanul Muslimiinta, waxayna soo shaac baxaday sannadkii hore, markii ay isku dayday dilka ku-xigeenka xeer-ilaaliye Guud. Wixii intaa ka danmbaysay waxaa la sheegay in kooxdu fulisay weerarro fara badan oo argagixiso ah.
Dalka Masar waxaa saaran xukun xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay 25kii Oktoobar 2014kii, ka dib markii weerarro is dabajoog ah lagu dilay 26 askari, waxaana muddada xaaladdaas la kordhiyay, markii 2aad, 12kii Oktoobar 2017 oo 3 bilood oo hor leh lagu daray.